Waze na-agụnye dị ka ihe ọhụrụ ọhụụ nke ọsọ ọsọ n'okporo ụzọ | Gam akporosis
Waze ga-agwa gị mgbe ị gafere ịgba ọsọ ọsọ n'akụkụ ụfọdụ nke ụwa
Ugbo ala di elu nwere otutu ihe nchebe nke uzo gosipụta ịgba ọsọ ọsọ na onye ọkwọ ụgbọ ala pụọ n'okporo ụzọ iji rụọ ọrụ aka nke na-enyere aka ka ụgbọala ahụ n'onwe ya ghara ịfe ya ma na-eme ya na akpaghị aka.
Waze aburula otu n'ime ndị kasị mma ụzọ na-enyere aka na nso nso a ka emelitere ya na a nnukwu na ụdị ọhụrụ na 4.0. Otu n'ime akwụkwọ akụkọ ọhụrụ akpọrọ taa bụ na ọ ga-agwa ndị ọrụ mgbe ọsọ ọsọ nke okporo ụzọ gafere.
Ọ bụ na 4.0 mgbe sọsọ ọsọ ịnya ụgbọ ala dị n’akụkụ aka ekpe ala inye onye ozo uzo ozo nke ugbo ala. Ihe na - eme na nke ugbu a ọ ga - egosi ihe ngosi nke ike kachasị enyere n'okporo ụzọ anyị na - anya.
Mgbe oke a gafere, ihe ngosi ahụ ga-acha uhie uhie ka ọ bụrụ ọzọ njikere icon na-egosi ozugbo, dị ka a ga - asị na ọ bụ akara ngosi okporo ụzọ, na - egosi ọsọ ọsọ enyere. Ọhụụ ọhụrụ a agaghị akwụsị ruo mgbe ọsọ ọsọ belata ma dị ala karịa ihe egosiri.
Naanị ihe ọrụ a bụ amachi na mpaghara na mba ndị ga - enweta ya bụ: Austria, Belgium, Brazil, Colombia, Czech Republic, El Salvador, France, Hungary, Italy, Lithuania, Liechtenstein, Holland, New Zealand, Sweden, Switzerland, Trinidad, Tobago na Uruguay.
Agbanyeghị, ọrụ ga-abata n’oge na-adịghị anya na mba ndị ọzọ ma si otú ahụ onye ọrụ nwere ike ịnwe ezigbo njirimara nke nwere ike ịnwe iji nwee nchekwa ka ukwuu n'okporo ụzọ. Site n'ụzọ, enwere ike ịhazi ọhụụ dị elu ka ọ pụta mgbe ejiri karịa pasent 5, 10, ma ọ bụ 15 karịa.
una naanị arụmọrụ Waze na nke ahụ ga-eru Google Maps n'oge ụfọdụ.
Igodo Waze na Okporo ụzọ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Waze ga-agwa gị mgbe ị gafere ịgba ọsọ ọsọ n'akụkụ ụfọdụ nke ụwa
Ngwa igwefoto 5 iji chọọ ihu gị mma ma were selfie kachasị mma
Nwere ike ịkekọrịta vidiyo nke 60 na nke abụọ na Instagram